Soo dejisan ImgBurn 2.5.8.0 – Vessoft
Soo dejisan ImgBurn
ImgBurn – software ah in la images disk shaqeeyaan. Software wuxuu taageeraa noocyo badan oo images disk, oo ay ku jiraan ISO, DVD, IMG, DI, FLAC, guud, QASHIN, NRG iwm ImgBurn ka kooban yahay si ay u qoraan hababka image faylasha in disc ah iyo akhriso disc ah in file ah image. Software wuxuu kuu ogol yahay in la abuuro faylasha image ah ka faylasha on your computer ama network iyo hubiyo tayada disc akhriska. ImgBurn sidoo kale awood u tahay in la beddelo magaca calaamad ISO-image joojin ama Unblock awood u leeyahay inuu furo saxaarad drive. Software waxay leedahay interface fudud oo dareen leh.
Taageerada qaabab caan ah images disk
Hababka kala duwan si ay ula images disk shaqeeyaan
ImgBurn Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Desktop Sidebar 1.05.116 beta
العربية, English, Français, Español... abgx360 1.0.6